Ciriqa Lugaha Gaaldiid
Bogga Hore > Causes > Ciriqa Lugaha
Ciriqa waxa keena dhiiga oo urura kadibna sameeya xinjir awda xididka, taasoo keenta in ay adkaato isu socodka dhiigu. Dhiigaas xinjiroobay waxa uu u gudbi karaa xubno kale oo jidhka ah sida sanbabada. Ciriqa laga hortago goor hore dhib badan ma keeno balse hadii aan laga hortagin waxa uu halis galiyaa isu socodka dhiiga. Sida caadiga ah Dhiiga xinjiroobaa waxa uu ku badanyahay lugaha gaar ahaan xidida mara kubka.
Kubka ayaa ku bararaya.
Lugtu way ku kaaraysaa.
Xidida lugahaaga ayaad arki kartaa.
Midab guduudan ayaad arki kartaa.
Xummadna waad dareemaysaa.
KA HORTAG CIRIQA:-
Si aad uga hortagto ciriqa waxa muhiim ah inaad socotid adigoo ka shaqaysiinaya jirka. Hadii aanad jirka dhaqaajin waxa xidhmaya isu socodka dhiiga taas oo keenaysa inay lugtu ku bararto.
Hadii aanad kici karayn isku day inaad dhaqdhaqaajiso lugaha iyo faraha lugaha dhawr jeer maalintii. waxa kale oo fiican inaad isticmaasho sharaabado kugu dhagsan kuwaas oo kaa caawinaya in isu socodka dhiigu fiicnaado kana hortagaya inaan dhiigu ururin.
Hadii aad leedahay ciriqa lugaha oo aad in badan fadhinayso tusaale ahaan marka aad saarantahay diyaarad ama gaadhi isku day inaad ka hor tagto hawl gabka lugahaaga adigoo dhaqdhaqaajinaya.
Dhiiga xinjiroobay ee xidhay isu socodka dhiiga waa in sida ugu dhakhsaha badan dhakhtar kuu caawiyaa waxaana lagu siinaya dawooyin furfrura xinjirta ururtay. Hadii aan la dawayn xinjirta ururtay way sii kobcaysaa taasoo xanibaysa isu socodka dhiiga oo keeni karta halista wadno xanuun. Dawada ugu wanaagsan waa inaad ka hortagto oo aad joogtayso jimicsi iyo dhaqaajinta jirkaaga.
Sharabaadada cabir ku le’eg ka dooro.